China Factory Excavator Hydrol Cylinder ary mpanamboatra | Xinrun
1.Excavator andian-tsarimihetsika misy tavoahangy tokana misy siny tokana ampiasaina ho toy ny miverina mihetsika mihetsika actuator ao amin'ny rafitra hydraulic excavator. Ny vovo-tsolika hydraulic series an'ny PC dia karazana vokatra vita amin'ny varingarina hydraulic fikarohana izay nohadihadiana manokana ary novokarin'ny Komatsu sy ny teknolojia Kayaba any Japon. Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny tsindry miasa mafy, ny fampisehoana azo antoka, ny fametrahana azy mora sy ny fanaparitahana, ny fikojakojana mora foana ary ny fitaovana buffer. Ny tombo-kase rehetra amin'ity andiana silinder hydraulic ity dia tombo-kase nafarana. Ny velaran'ny tehina piston dia mihamafy sy nopetahany chromium mafy, ary ny fahamendrehana aorian'ny famolahana dia mety hahatratra ny Ra0.08, ny teknolojia Kayaba mitroka ny lohan-dabozia dia novolavolaina manokana araka ny fepetra fiasan'ny excavator. Ny vy dia vy malemy, ary ny tendrony roa dia voan'ny buffer mitsingevana. Manana fampisehoana an-tsoroka tsara izy io. Ampiasaina indrindra izy io amin'ny excavator hydraulic PC series and excavator hydraulic hafa novokarina tao an-trano sy tany ivelany.
2. Famolavolana endrika an'ny varingarina hydraulic excavator:
A.Ny tehina piston dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy mahery. Ny velaran'ny tehina piston dia vonoina miaraka amin'ny hafanana antonony hatramin'ny hamafin'ny HRC62. Ny velaran-tsoratry ny piston dia nopetahany soratra matevina ary nohosorana mba hasiana fihoaran-kery hanakanana ny piston tsy hisintona sy hikapoka, ny fiainana maharitra tombo-kase dia manana singa azo antoka 5 farafahakeliny ny tanjaka fihenjanana amin'ny tsindry omena eo amin'ny tsipika faran'ny ambany indrindra ny tehina piston sy ny fivorian'ny piston.
B. Ny tanany fitarihana dia vita amin'ny vy ductile arakaraka ny toerana fitrandrahana. Vita amin'ny vy vy nodola izy io ary mahazaka fanoherana avo. Izy io dia miaraka amin'ny sliding bear import avy any Japon. Ny tsindry ambony indrindra amin'ny fiterahana dia 270n / mm2, ny enta-mavesatra dia 140n / mm2, ny hafainganam-pandeha 5m / s, ny coefficient an'ny friksi dia 0,02 ~ 0,07, ny maripana miasa dia - 200 ° C hatramin'ny 280 ° C, ary ny faritra mitarika dia mampihena ny fihenjanana hatramin'ny farany haharitra amin'ny enta-mavesatra lehibe, Manitatra ny fiainana ny varingarina roa sy ny tombo-kase.
C. Ny tombo-kase vy dia vita amin'ny peratra vovoka, peratra tombo-kase piston ary buffer hydraulic, izay afaka misoroka tsara ny famoahana solika hydraulic ny tehin'ny piston. Ny peratra vovoka dia peratra vovoka avo roa heny. Ny asany dia ny fisorohana ny vovoka, loto, fasika ary vy tsy hiditra. Manakana mafy ny fikororohana, miaro ny singa mpitari-dalana ary manalava ny fiainana serivisy amin'ny tombo-kase. Ny molotra famehezana antonony dia mampihena ny sarimihetsika misy menaka sisa tavela. Ny fitaovana polyurethane dia miantoka ny toetra tsara amin'ny fikorontanana maina ary mampitombo ny fanoherana, noho ny fanoherana tsara ny ozone sy ny taratra vokatry ny toetr'andro, dia maharitra ny fiainam-panompoana. Ny mari-pana miasa dia avy amin'ny - 35 ° C ka hatramin'ny 100 ° C, ary ny haingam-pandeha dia ambany noho ny 2 m / s. Ny peratra fametahana tombo-kase ny kiborin'ny piston dia tombo-kase molotra misy molotra famehezana roa ary mifatotra tsara amin'ny savaivony ivelany. Noho ny lubricant fanampiny eo anelanelan'ny molotra roa, dia tena manakana ny tsy fifandonana sy ny akanjo maina izy io, manohitra ny fiatraikany sy ny fihoaram-pefy ary manatsara ny fanamafisana eo ambanin'ny tsindry zero. Ny tsindry miasa dia 40MPa, ny mari-pana miasa dia - 35 ka hatramin'ny 110 ℃, ary ny haingam-pandeha dia ambany noho ny 0,5m / s. Ny fiasan'ny buffer hydraulic dia ny mandray ny fiatraikany sy ny tsindry miovaova eo ambanin'ny enta-mavesatra be, manasaraka ny tsiranoka avo lenta ary manatsara ny faharetan'ny tombo-kase. Ny tsindry fara tampony dia mety hahatratra 100MPa. Noho ny endriny manokana amin'ny alàlan'ny molotra mihetsiketsika izay afaka mamoaka ny tsindry miverina, dia afaka manafoana ny tsindry eo anelanelan'ny peratra famehezana sy ny fantsom-pamaky ny tsorakazo mitanjozotra, ary mamindra ny tsindry niforona teo anelanelan'ny tombo-kase lehibe sy ny tombo-kase buffer niverina tany amin'ny rafitra.
D. Ny valizy vita amin'ny varingarina dia vita amin'ny vy 27SiMn amin'ny alàlan'ny tanjaka avo, endrika kely ary lanja maivana, nohomboana ary nakodia tamin'ny famaranana ambony, mba hampihenana ny fikorontanana anaty ary hanalava ny fiainam-piraketan'ny tombo-kase.
E. Ny piston mahazatra dia fanariana miaraka amina concentricity roa mifanaraka amin'ny tehin'ny piston. Ny piston dia mihidy mafy amin'ny kofehy ahodina eo anelanelan'ny voanjo sy ny voanjo piston, mba hiantohana ny asa azo antoka ateraky ny fanerena sy ny faritra avo. Ny tombo-kase piston rehetra dia vokatra avy any Parker sy NOK. Ny sisin'ny piston dia apetraka miaraka amin'ny kavina 4mm matevina vita amin'ny PTFE. Satria manana ny asan'ny fanitrihana fahalotoana izy, ny menaka dia azo sorohina tsy ho simba noho ny fifangaroana amin'ny akora ivelany, mba hahazoana antoka fa manana tombam-panompoana lava ny tombo-kase ary afaka mitana andraikitra mitarika sy manohana. Ny peratra fanohanana dia manana fahaiza-mitondra matanjaka, izay afaka manafoana ny metaly rehetra amin'ny fifandraisan'ny vy eo anelanelan'ny piston sy ny bolongan-tsolika, manome ny fahafaha-miteraka avo lenta, mandray ny fiantraikany, mampitombo ny faritra misy ny fifandraisana ary misoroka ny sakana misy varingarina. Ny tombo-kase piston dia mandray ny tombo-kase OK an-kalamanjana Pak, izay manana tombony amin'ny fanoherana ny enta-mavesatra, ny fanoherana ambany ary ny fametrahana tsotra. Noho ny fahombiazan'ny fitaovana manokana an'ny peratra tombo-kase, dia manana fahaiza-manao fanoherana mahery vaika izy eo ambanin'ny tsindry avo sy ny fahazoan-dàlana lehibe, ary ny tsindry miasa dia avo tahaka ny 50MPa.
F.Ny tanan'akanjo buffer misy lava-kazo dia fehin-tànana afovoany, izay afaka manitsy ny concentricity ho azy, ary satria misy banga be eo anelanelan'ny tanany buffer sy ny piston, dia azo ahena ny tsindry fanombohana. Ny plunger buffer dia mampiasa fetra baolina vy, izay afaka mitsingevana. Ny buffer sleeve sy buffer plunger dia manana toetra mampiavaka azy. Noho izany, afaka manana banga buffer kely dia kely izy, mampifanitsy ho azy ny afovoany ary manafoana ny fitaoman'ny lesoka coaxial shaft. Ny fampisehoana buffer dia tsara, izay afaka mampihena ny tabataba sy ny enta-mavesatra ary manitatra ny androm-piainan'ny milina.
Manaraka: Cylinder Hydraulika andiany HSG01-E
Silinder Hydraulika elektrika
Silinder Hydraulika Mini
Silinder Hydraulika kely
Varingarin'ny Hydraulika nohosorana